တောင်ဝှေးလေးနဲ့ ကိုကို .. ဒါမှမဟုတ် တစ်လမ်းကိုပဲ ရွေးပေတော့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောင်ဝှေးလေးနဲ့ ကိုကို .. ဒါမှမဟုတ် တစ်လမ်းကိုပဲ ရွေးပေတော့
တောင်ဝှေးလေးနဲ့ ကိုကို .. ဒါမှမဟုတ် တစ်လမ်းကိုပဲ ရွေးပေတော့
ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် ခြေကျိုးလို့ တောင်ဝှေးထောက်ပြီး တစ်ပေါင်ကျိုး လျှောက်လာနေတယ်လို့ ထင်ရတယ် .. သူ့ အသက်က ဘာရှိသေးလို့တုန်း .. အလွန်ဆုံး ၄၅ ပေါ့ ..
“ဆရာမရေ .. ကျွန်တော် လမ်းကောင်းကောင်းလျှောက်လို့ မရတော့ဘူး .. လေးငါးဆယ်လှမ်းပဲ လှမ်းရသေးတယ် .. ခြေသလုံးထဲက ထိုးကိုက်တက်လာတာ .. တခါတည်း ထိုင်သွားတာပဲ .. ဆရာမဆီကို အခု လာတာတောင် လမ်းမှာ လေးငါးခါ နားခဲ့ရတယ် .. ကယ်ပါဦး ဆရာမရယ် ..”
“ဒီလိုဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ ”
“အရင်ကတော့ တော်တော်လေး ဝေးဝေးလျှောက်မှ ဖြစ်တာ .. ခဏ နားလိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆေးပူလေး လိမ်းလိုက်ရင် သက်သာသွားလို့ ဆေးခန်းကို မလာဖြစ်ဘူး .. အခုတော့ နှစ်ပတ်လောက် ရှိပြီ ဝေးဝေး မသွားနိုင်တော့ဘူး ..”
“ကဲ ကုတင်ပေါ်တက် စမ်းကြည့်တာပေါ့ ..” သူ့ခြေထောက်မှာ သွေး အလျှောက်နည်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်
“ရှင့်ကို အရင်ကတည်းက ပြောထားသားပဲ ဒီ အန္တရာယ်များတဲ့ ဆေးလိပ်ကို ဖြတ်ပါလို့ .. ရှင့် ယောက်ဖလဲ ဆေးလိပ်ကြောင့် နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီး သေခဲ့ပြီးပြီ .. နောက်တစ်ယောက်ကလဲ အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပြီး သေခဲ့ပြီးပြီ .. ဒါတောင်မှ ရှင်က မီးပုံဆက်တိုးချင်တဲ့ ပိုးဖလံလိုပါပဲလား .. ကဲ .. အခု သွေးကြောတွေ ကျဉ်းလာလို့ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ခြေထောက်က လိုအပ်တဲ့ သွေး မရတဲ့အတွက် နာကျင်တာပဲ .. ဆက် သောက်ရင် .. သွေးကြော ပိတ်သွားရင် ခြေထောက် ဖြတ်လိုက်ရတာအပြင် .. ပိုမရှိတော့ဘူး .. ဒီတော့ ခြေထောက်ဖြတ်မလား .. ဆေးလိပ် ဖြတ်မလား တစ်ခုခုတော့ ဖြတ်ရတော့မယ် .. ”
“ခြေထောက်တော့ မဖြတ်ပါရစေနဲ့ ဆရာမရယ် .. ဆေးလိပ်ကိုပဲ ဖြတ်ပါ့မယ် ..” တတ်သမျှ မှတ်ထားသမျှ လိုက်လံ မေးမြန်းထားသမျှနဲ့ ကုပေးလိုက်တော့ လူကောင်းနီးပါး ပြန်လျှောက်နိုင်ပြီပေါ့ .. ဒါပေမယ့် လူ့စိတ်ဆိုတာ အခက်သား ..
“ဆရာမရယ် .. ကျွန်မယောက်ျားကို ပြောပါဦး ဆေးလိပ်နံ့ ပြန်ရနေပြီ ..”
“ဟုတ်တယ် .. သူများကို ဆေးခန်းလိုက်ပို့ရင်း .. ဆေးခန်းရောက်တဲ့အခါ ဆေးလိပ်နံ့ ပြန်ရနေတယ် .. သူ့ကိုမေးတော့ မသောက်ပါဘူး လို့ ငြင်းတယ် .. ရောင်းတဲ့လူက ကျွန်မကို ပြန်ပြောပြတာပေါ့ .. သူ့ကိုယ်သူ ညာနေတာ .. ကောင်းသွားပြီလို့”
နောက် တနှစ်လောက် အကြာမှာ တော့ “ဆရာမရယ် .. ကျွန်တော် အသက်ရှူလို့ မ၀ဘူး .. ရင်ထဲမှာ ကျပ်ပြီး မောလာတယ်”
“ဟော ကျွန်မ ပြောခဲ့သားပဲ .. ဆေးလိပ်ရဲ့ အဆိပ် .. နှလုံးထဲ ရောက်ပြီ .. ရှင်လဲ ရှာထားဖွေထားတာ ပြည့်စုံသလောက်ရှိနေပြီ .. ရွှေ၊ ငွေ၊ မိန်းမ၊ ကလေး၊ စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ဘူး .. ဒီတော့ ဆေးလိပ် ဆက်သောက်ပြီး အားလုံးကို နှုတ်ဆက်လို့ နောက်လူအတွက် ထားခဲ့မလား .. .. ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီး ရောဂါတွေ ပျောက်အောင် ဆေးဆက်ကုပြီး ဒီမိသားစုနဲ့ ဆက်နေဖို့ ကြိုးစားမလား .. ကြိုက်တာ ရွေးပေတော့”
ရွာသားတို့ဆိုရင် ဘာကို ရွေးမှာလဲ (၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ရေးခဲ့တယ် .. သူလဲ အခုတော့ ဆေးလိပ် ပြတ်သွားပါပြီ .. မြေး ထိန်းနေရပြီ)
ဆေးလိပ်လည်းမပြတ်ဘဲ ကွမ်းပါစွဲသွားတဲ့လူတွေ တွေ့ဖူးတယ်
သူများက ကွမ်းတို.ဆေးလိပ်တို. ကြီးမှ သုံးစွဲတာ
ကျွန်တော်ကတော. ငယ်ငယ်မသိတတ်တုန်းက အတုမြင်အတတ်သင်လုပ်ဖူးပါသည်
7 တန်းနှစ်ကစပြီး ဘာမှမလုပ်တော.ပါ။
မမိုးသီတာ ရေ….အန္တရာယ် ရှိမှန်းသိနေရဲ.သားနဲ့ ရှောင်ဖို.ခက်တဲ့ အထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်တာ အခက်ဆုံးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ခြားမူးယစ်ဆေးဝါးတွေလို လည်း ပိတ်ပင်တားမြစ်မှု မရှိ ၀ယ်ယူသုံးစွဲဖို့ ကလည်းလွယ် ဆုတ်ယုတ်မှု ကလည်းချက်ခြင်း မပြတော. မသိမသာနဲ့စွဲ ပြီး နောက်ဆုံး ဒုက္ခ ရောက်ရတာပေါ.။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာအောင် သောက်ခဲ့တာ ၊ သောက်စတုန်းကတော့အပျော် ဖွာတာ ပြီးတော. လူအထင်ကြီးအောင်၊ လူပေါင်းဆံ့တယ် ၊စတိုင်ကျတယ်ပေါ. ။နောက်တဖြေးဖြေးစွဲ သွားတယ် အသိဝင်တဲ.အချိန်မှာနည်းမျိုးစုံနဲ ဖြတ်ဖို.ကြိုးစား ပေမယ့် မရတော့ဘူး။၂၀၀၇ မှာ ကျွန်တော့် မွေးစား အမေ အင်္ဂလိပ်မကြီး အဆုတ်ရောဂါနဲ.ဆေးရုံ ရောက်ပြီး နှစ်ပတ်နဲ.ဆုံးသွားတယ်၊ သူမဆုံးခင်မှာ သေမယ်ဆိုတာ သူသိတော. ကျွန်တော့ကို ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ကတိတောင်းတယ်၊ ဟုတ်ကဲ့လို.ပြောပြီး ဆေးရုံအောက်ဆင်းပြီး ငိုရင်း နဲ့ သောက်တယ်။
သူမသိအောင် သောက်ပြီးချွင်းဂမ်းဝါးပြီးမှသူ့ဆီဝင်တယ်။သူဆုံးသွားတော. နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် အလုပ်မဆင်းဘဲ အိမ်ထဲမှာတင် အရက် နဲ.ဆေးလိပ် ပဲသောက်တာ မူးပြီးအိပ် ပြန်နိုးလာတော.ဆက်သောက်
ကုန်သွားရင်ထပ်ဝယ် သောက် ပြန်မူး နဲ့ ခွင့်ကုန်ပြီးအလုပ်ပြန်ဝင် ရ မယ်.နေ.မတိုင် ခင် တစ်၇က်မှာ ရပ်တယ်။ နောက် နေ့အိပ်ယာနိုးတော. ဆေးလိပ်ကောက်ကိုင် မီးညှိပြီး နှစ်ဖွာလောက် ဖွာလိုက်တာ လူချာလပတ်လည်ပြီးမူးသွားတယ်၊ နောက် တော.ခဏနား ပြန် သောက် မရဘူး မူးတယ် ပါးစပ်ကသောက်ချင်ပေမယ့် အနံ့လည်းမခံနိုင်တော.ဘူး မူးတာလည်းမခံနိုင်တော.ဘူး။ အဲဒီကတည်းက ဆေးလိပ်လုံးဝပြတ်သွားတာ ခုထိပါပဲ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ် အရမ်းလှုပ် ရှားတဲ.အချိန်မျိုး မှာ တောင့်တ မိသေးတယ် ဒါပေမယ်. ဘယ်လိုမှကို သောက်လို့မရတော.တာ၊
ကံကောင်းထောက်မပြီးပြတ်သွားတယ် ဘာအကူအညီမှလည်းမလိုလိုက်ဘူး ။ လမ်းကြောင်းရွေးမှန်သွားတယ်။
ဆေးလိပ်က အရမ်းဆိုးပါတယ် ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားကိုဖြစ်စေတာ ဆေးပေါ့လိပ်နဲ့ စီးကရက်ထက် စာရင် စီးကရက်က ပိုပြီးဆိုးပါတယ်.. ဆေးလိပ်သောက်မှ စမတ်ကျမယ်လို့များထင်နေကြလားမသိပါဘူး.. ဘယ်သွားသွားလူငယ်တွေ လက်ထဲမှာ ဆေးလိပ်ကအမြဲတွေ့နေရတယ်.. ဆေးလိပ်တွေ မရှိတော့ရင် သိပ်ကောင်းမယ်….ငယ်တုန်းလဲ မသောက်သင့်ဘူး ကြီးလာတဲ့အခါလဲ ပိုဆင်ခြင်ရမှာပါ.. ခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးနော်.
ဟိုတလောကတော့အမျိုးသားကိုzero smoke ဆိုတဲ့နားကပ်လေး
ဆေးလိပ်က မကောင်းမှန်းသိပင်မယ့် တော်တော်များများ ယောကျာင်္းလေးတေါက မဖြတ်နိုင်ကြဘူး
အခုဆို ဘာမဟုတ်တဲ့ (9/10) တန်းကလေးတွေ၇ဲ့ လက်ကြားမှာတောင် ဆေးလိပ်နဲ့
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်….
http://myanmargazette.net/19712/health-fitness ဒါလေး ဖတ်ပြီး ဆက်သောက်သင့် မသင့်ကို ဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်…
အာသာပြေဆိုပြီး electronic စီးကရက်ဆိုတာ ပေါ်လာတော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာရင် ဆေးလိပ် သောက်သလို ဇိမ်ယူကြတယ် .. ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးတော့ မသိပါ ..
တကယ် ဖြတ်ချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် .. နောက် ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ အရေးကြီးပါတယ် ..
အခု ပြန်သောက်နေကြတယ် ဆိုတာ peer pressure ကြောင့်ပါ .. သောက်တဲ့လူ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဆက်ရှိနေပြီး အဲဒီလူတွေကလဲ ကိုယ့်ကို ပြန်သောက်ဖြစ်အောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲ ဖန်တီးနေမယ် ဆိုရင် ပြန်သောက်ဖြစ်မှာပါ ..
အရေးအကြီးဆုံး ထပ်ရေးပါမယ် .. ကိုယ့်ရဲ့ စိတ် တစ်ခုတည်းပါ ..
စီကရက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဗျာ..လုံးဝ မဂွတ်..
အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲ ဆိုတာ လက်ခံတယ်ဗျာ..
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မနိုင်လို့မဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ..
ကျန်တာ အကုန်ဖြတ်နိုင်ပြီး..ဒီအငွေ့ ကြမှ ဘာလို့ မဖြတ်နိုင်တုံး မသိပါဘူးဗျာ
လူတွေက တော်တော်လေးကိုလုပ်ကြတယ် ( အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆိုလိုပါသည် )
ဒီနေရာမှာ အစပထမဆိုတာကတော့ ပြောလည်းထူးတော့မှာမဟုတ်ဘူး
အစကိုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအကြောင်းမှာတည်နေပြီဆိုရင် ( ဥပမာ။ ဆေးလိပ်၊ အရက် စသည်)
ကျွန်တော်ကကတော့ ဆေးလိပ် မရှူ ကွမ်းယာ မဝါးပါဘူး
ဆေးလိပ်မသောက်၊ ကွမ်းမဝါး၊ သေရည်မသောက်၊ မူးယစ်ဆေးမသုံးစွဲ၊ လောင်းကစားမလုပ်၊ မိန်းမ….. မလိုက် တဲ့
အဖေက ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်တယ်။ အဲဒါကို ဖြတ်ဖို့ပြောတော့ နင်တို့ ဇီးထုပ်ဖြတ်ရင် ငါလည်း ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်တဲ့လေ။ ဘယ်လိုမှ ပြောမရပဲ တစ်ခါကျတော့ အမသူငယ်ချင်းက သူ့အဖေကို သူပြောတာ ဆေးလိပ်ပြတ်သွားပြီ။ အမကို နင်ညံ့လှချည်လား။ အဖေကို ဆေးလိပ်မသောက်အောင် မပြောနိုင်ဘူးလားလို့ အဖေ့ရှေ့မှာ ပြောမှပဲ အဖေလည်း သူ့သမီးကို ပြောတာ မခံနိုင်တာနဲ့ ဆေးလိပ်ပြတ်သွားတယ်။
ဆေးလိပ် ဖြတ်တဲ့ ပီကယ် ရှိတယ် ဆိုလား နီကိုးဒင်း ပါလို့ မသောက်လည်း အဆင်ပြေတယ် ပြောတာပဲ။
တချို့ကစိတ်တော်တော်ပြတ်တယ်။ မတည့်ဘူးဆိုရင်တိကနဲဖြတ်နိုင်တယ်။ အများစုကတော့မဖြတ်နိုင်ကြပါ။